सौर्य ऊर्जा कृषि विकास र उद्यमशीलताकाे सारथी
प्राधिकरण : ९८२८ मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी : ५७९२ मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र : ११७४२ मे.वा.घन्टा
आयात : ५५३१ मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग : ३२८९३ मे.वा.घन्टा
उच्च माग : १५५७ मे.वा.
२०७९ जेठ १४, शनिवार
विद्युत प्राधिकरणमा राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोक्नेका दिन सकिए
कोहलपुर वितरण केन्द्रले २४ घन्टाभित्रै मिटर उपलब्ध गराउने
गण्डकी प्रदेशले पनि बूढीगण्डकी र उत्तरगंगा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो
नेप्से १५.८२ अंकले घट्दा २२२३.७८ बिन्दुमा पुग्यो
ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ १ खर्ब १३ अर्बको बजेट
जगदुल्ला हाइड्रोमा रोजगारीको अवसर खुल्यो
२०७९ ब‌ैशाख २२
काठमाडाैं । अन्नबाली थन्क्याएपछि सुकाउन सूर्यको प्रत्यक्ष प्रकाश र ताप दुवै आवश्यक भएको तथ्य हामीबाट लुकेको छैन । ढिकी जाँतो, मिलमा कुटानी पिसानी गर्नु अगाडि अन्न राम्रोसँग सुक्नु जरुरी छ ।
बढ्दो जनसङ्ख्या र खाद्यान्नको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न कृषिमा ऊर्जाको माग उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । जसका लागि पहिले देखि नै उपलब्ध उर्जाका स्राेतहरू अपर्याप्त मात्र नभएर सञ्चिति पनि घट्ने अवस्थामा पुगेकाे छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्य पक्षसँगै ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरूको अनुसन्धान र खोजी क्षेत्र पनि कृषि अनुसन्धानकर्ताहरूको चासोको विषय बनेको छ ।
सूर्य ऊर्जाको अनन्त केन्द्र हो, जहाँ सौर्य ईन्धन सौर्यमण्डलको जन्मदेखि नै फ्युजन प्रक्रियाद्वारा सौर्य ऊर्जामा परिणत हुँदै आएको छ । ऊर्जाकाे माग पूरा गर्न सौर्य ऊर्जाको प्रयोग केन्द्रीय महत्त्व हो । सौभाग्यवश, सर्वशक्तिमान सौर्य ऊर्जामा धेरै सुविधाहरू छन्, जुन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो गम्भीर प्रभावहरू, विशेष गरी ग्लोबल वार्मिङलाई सम्बोधन गर्न, विकासशील देशहरूले तुरुन्तै परम्परागत ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जामा स्वीच गर्न खोजिरहेका छन् ।
सौर्य ऊर्जा बहुउपयोगी र गैरप्रदूषणकारी : यसलाई सबै नवीकरणीय ऊर्जा मध्ये सबैभन्दा बलियो पूरक मानिन्छ । कृषि क्षेत्रले सौर्य ऊर्जाका यी विभिन्न सुविधाहरूको फाइदा उठाउन विभिन्न तरिकाहरू पनि प्रयोग गर्दछ । उदाहरणका लागि, सौर्य ऊर्जाको थर्मल गुणहरू खाद्य पदार्थ, तरकारी, बाली र मासुजन्य खाध्यपदार्थ आदि सुकाउन प्रयोग गरिन्छ ।
सौर्य उर्जाको प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर यी सामान सुकाउने काम धेरै समय लाग्ने हो भने समयको बर्बादी हुनुका साथै धुलो, कुपोषण, खाना, कीरा र झिँगाबाट प्रदूषित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसकोअतिरिक्त हावाहुरी र वर्षा जस्ता अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तनहरूले गम्भीर क्षति निम्त्याउन सक्छ । आधुनिक समयमा सौर्य ऊर्जाको प्रत्यक्ष प्रयोगका लागि विभिन्न प्रकारका सौर्य ड्रायरहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
विगत केही दशकदेखि सौर्य ऊर्जालाई विभिन्न प्रकारका ऊर्जामा रूपान्तरण गरी रासायनिक ऊर्जा र विशेषगरी विद्युतीय ऊर्जामा विभिन्न सेवाका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न रूपान्तरण विधिको सुधारका लागि अनुसन्धानलाई धेरै महत्त्व दिइएको छ । सौर्यलाई विद्युतीय ऊर्जा "एकल ऊर्जा" मा रूपान्तरण गर्दा जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रयोग बढाएको छ ।
एकल ऊर्जाको प्रयोगका लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धान भइरहेको छ । यसको प्रयोगले विभिन्न उद्देश्यका लागि ऊर्जाको अभावलाई कम गर्ने मात्र होइन, यो वर्षभरि सम्पूर्ण पृथ्वीमा सस्तो, सजिलो, असीमित र व्यापक रूपमा उपलब्ध ऊर्जाको स्रोत पनि हो । पानी पम्पिङ, प्रकाश, कीटनाशक स्प्रे, ट्र्याक्टरलगायत विभिन्न प्रकारका मेसिनरीका लागि यो एकल ऊर्जाको प्रयोग कृषिमा दिनानुदिन नवीकरण हुँदै गएको छ ।
तर, यसरी कृषिमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग अझै सीमित छ । यसबाट लाभान्वित हुन धेरै चेतना र अनुसन्धान आवश्यक छ र भविष्यमा ऊर्जाकाे खाँचाे पनि पूरा हुने आशा छ । यो लेखमा सौर्य ऊर्जाको जागरूकता र कृषि क्षेत्र र कृषि उद्योगको विकासमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावित भूमिका समावेश छ ।
सौर्य उर्जाको फाइदा उठाउन र त्यसको उपभोग गर्न विभिन्न एप्लिकेसनहरू मार्फत विभिन्न कृषि कार्यहरू सहज बनाउनुको साथै कृषि क्षेत्रलाई बिभिन्न माध्यमबाट प्रयोग गरी सुधार गर्न हालसम्म भएका अनुसन्धानलाई पछील्ला अध्ययनमा समेटिएको छ । यस अध्ययनले सौर्य ऊर्जाको विभिन्न विशेषतासहितको उपयोग गर्न ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता र किसानबीच समन्वय प्रदान गर्नेछ ।
सौर्य ऊर्जा पानी तान्ने प्रविधि : सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्ने प्रविधि नेपालमा पनि नौलो छैन ।राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत लिएर होइन, बरु प्रसारण लाइनलाई योगदान दिएर सिँचाइ सम्भव छ । कुनै इन्धन लागत पर्दैन, किनकि यसले उपलब्ध निःशुल्क सूर्यको प्रकाश प्रयोग गर्दछ । दीर्घायू, अत्यधिक भरपर्दो र टिकाउ सञ्चालन र मर्मत गर्न सजिलो, वातावरणमैत्री यो प्रणालीलाई नेट मिटरिङ्ग पद्धत्तिमा समावेश गरी आवश्यकता भन्दा दोब्बर क्षमताको सिष्टम जडान गरेमा २४सै घण्टा पानी तान्न सकिन्छ ।
सौर्य स्प्रे र बीउ छर्नका मेसिनहरू : आजको युगमा सबै क्षेत्रहरूमा धेरै उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग गरेर द्रुततर विकास भइरहेकोछ । यी सबै क्षेत्रहरूमध्ये कृषि पनि एक हो । खाद्यान्नको बढ्दो माग पूरा गर्न माटोको बनावटमा असर नपर्ने र समग्र खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृषकहरूले उन्नत प्रविधि अपनाउनुपर्छ ।
परम्परागत बीउ छर्ने काम मानवहरूले हातको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । सोलार सीड स्प्रेयर मेसिन परियोजनामा, हपरमा रहेको बीउलाई फ्यान वा ब्लोअरको माध्यमबाट सिधै जमिनमा कुनै हातको प्रयोग नगरी नगरी स्प्रे गरिन्छ । यो प्रक्रिया प्रयोग गरेर हलोकोसियोमा बीउहरू जमिनमा छरिन्छ। यो प्रविधि प्रयोग गर्नुको मुख्य फाइदा यो हो कि, यसले बीउ जमिनमा पर्ने समय घटाउनुका साथै मानवश्रम पनि कम हुन्छ ।
आवश्यक उर्जा सोलार पाताबाट नै प्राप्त हुने भएकोले अतिरिक्त विद्युत या पेट्रोलियम पदार्थको जरुरत पर्दैन।
सौर्य खाद्यपदार्थ सुकाउने प्रविधि : परम्परागत विधि भनेको खानालाई घाममा/मन्दआगोमा खुल्ला हावामा राख्नु हो । खाना खुल्ला हावामा राख्दा सजिलै दूषित हुन्छ । त्यसकारण, खानाको ठूलो परिमाणमा घाममा सुकाउने काम सजिलै गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको खाद्यान्नको मात्रा बढ्दै जाँदा अनुगमन र अवलोकन झन् गाह्रो हुँदै जानु हो । सौर्य सुकाउने विधिले अप्रत्यक्ष सौर्य विकिरण प्रयोग गर्दछ ।
सौर्य सुकाउने प्रविधिको सिद्धान्त भनेको सौर्य कलेक्टरबाट हावाको मात्रालाई तताएर सौर्य ऊर्जा संकलन गर्ने र कलेक्टरबाट तातो हावालाई सुकाउने कक्ष (च्याम्बर) मा लैजाने हो । यो बन्द प्रणालीमा वातावरणमा खाना (जस्तै; मासु, माछा) प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउने, वर्षा, धूलो, कीरा, मुसा वा चराहरूबाट उत्पादनको माध्यमिक प्रदुषण नहुने भएकाले मासु सुकाउने काम बढी स्वच्छ हुन्छ।
सौर्य ट्र्याक्टर : नियमितरूपमा गरिने खनजोतका अलावा, इनारबाट पानी तान्न र सडक सफा गर्न पनि यो ट्र्याक्टर उपयोगी छ ।त्यतिमात्र होइन, खेतबारीमा रातिमा बत्ति बाल्न इन्भर्टरको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ । आज डिजेलको मूल्य बढेसँगै किसानले एक ट्याक्टरमा दैनिक ४० लिटर डिजेल खपत गर्ने गरेका छन् । सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने ट्रयाक्टरको साथ, यो लागत एकदमै कम हुन सक्छ।
सौर्य सिँचाइ प्रणाली : सौर्य सिँचाइ प्रणालीका विविधरूपहरू छन् अर्थात् ब्यापक छ । सिँचाइका लागि यो प्रविधि कार्बन उत्सर्जन नहुने सफा प्रविधि हो । जसले पानी पम्प गर्न सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । ऊर्जा स्रोतको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग (इन्धन) प्रतिस्थापन गर्दछ र सिँचाइ गरिएको कृषिबाट हरितगृह ग्यास (ग्रिन हाउस ग्यास) उत्सर्जन घटाउँछ।
सौर्य ऊर्जाबाट मल : सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युतले हावाबाट सिधा नाइट्रोजन निकालेर नाइट्रिक एसिड उत्पादन गरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । नाइट्रिक एसिड मलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्व हो, जुन बोटबिरुवाहरूले हामीले खाने सबै चीजहरू बढाउन प्रयोग गर्दछ। युरोपेली मुलुकमा यो पद्धत्तिबाट मल बनाउने क्रम दिननु दिन बढ्दो छ ।
सौर्य डेरी फार्म : व्यवसायिक कृषि सौर्य ऊर्जा अति उपयोगी छ । ठूला-ठूला कृषिफार्ममा नेट मिटरमा आधारित सौर्य ऊर्जा जडान गरि बहुआयामिक फाइदा लिन सकिन्छ । फार्म तथा डेरीका कुनै पनि कामको लागि पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, सौर्यले प्रकाश, तताउने पानीको सिलिन्डर, युपिएस ब्याट्री चार्ज गर्ने र रेफ्रिजरेसन लगायत काममा बिजुलीकाे आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ ।
अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डमा यस्ता थुप्रै पशुफार्महरू छन्, जहाँ सौर्य ऊर्जाद्वारा उत्पादन गरी बढ्ता भएको विद्युत सरकारलाई नै बिक्री गरी अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका पनि छन् ।
अन्त्यमा, सौर्य अतिरिक्त खर्च होइन, आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाउने लगानीहो । स्वालम्बन र आधुनिक उद्यमशीलताको सारथी हो ।
#Energy for Agriculture
साैर्य ऊर्जाकाे व्यापकता : जल, जमिन र छतमा सम्भाव्यता
विद्युत विकासमा उदाउँदै जलाशय आयाेजना र ऊर्जा प्लान्ट हाइब्रिड प्रणाली
२०७८ ब‌ैशाख ८
बिजुली भारतले किन्दैन, देशमै खपत गराैं !
२०७७ कार्तिक १६